यी ७ स्वास्थ्य परीक्षण हरेक महिलालाई आवश्यक छ – Health Post Nepal
२०७६ फागुन २५ गते १९:२५
प्रत्येक वर्ष ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाइन्छ । नेपालमा पनि आइतबार विभिन्न कार्यक्रम गरी महिला दिवस मनाइएको छ ।
एउटी महिलाले जीवनमा अनेक उतारचढावपूर्ण चरण पार गर्छिन्, जहाँ उनले काम र निजी जीवनका बीच सही सन्तुलन बनाउने प्रयास गर्छिन् । तन्दुरुस्तीका लागि सन्तुलित आहारलगायत कैयौँ कारक छन्, त्यसैले बेहत्तर स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न हरेक महिलाले नियमित स्वास्थ्यजाँच गराउनु अनिवार्य छ।
व्यस्त कार्यतालिकाका बीच हरेक महिलालाई रोगमुक्त जीवनशैली सुनिश्चित गर्न केही परीक्षणको जरुरी हुन्छ । बढ्दो प्रदूषण, गतिहीन जीवनशैली, प्रशोधित खाद्यवस्तु, परनिर्भरता आदिले धेरैलाई अनेक रोगको उच्च जोखिममा पुर्याइदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकले सुझाएका केही स्वास्थ्यपरीक्षणबारे जानकारी दिइन्छ, जुन हरेक महिलाका लागि अत्यावश्यक मानिएको छ ।
१. एनिमिया परीक्षण
एनिमिया अर्थात् रक्तअल्पता नेपाली महिलाले झेलिरहेको साझा समस्या हो । यो नेपालका मात्र नभएर भारतलगायत अन्य दक्षिण एसियाली महिलाको पनि साझा समस्या हो । यो समस्या आम बन्नुका पछाडि कुपोषण, भारी महिनावारी, रक्तश्रावलगायत विविध कारण छन् । एनिमियाको परीक्षण आधारभूत र साधारण परीक्षण हो, जुन हरेक महिलाले गर्नुपर्छ ।
२. थायराइड प्रोफाइल
थायराइड पनि नेपाली तथा भारतीय महिलाको साझा स्वास्थ्य समस्या हो । यसमा अत्यधिक तौलवृद्धिलगायत कारण छन् । यो रगतको सामान्य परीक्षण हो, जुन हरेक महिलाले नियमित गर्नु आवश्यक छ ।
३. ब्लड सुगर लेबल
डायबिटिज (मधुमेह) को समस्या विश्वभरि नै बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यो समस्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो हृदयाघाट, स्ट्रोक, मिर्गौला फेललगायत अनेक ठूला रोगको कारक पनि हो । त्यसैले ब्लड सुगर लेभलको नियमित परीक्षण अनिवार्य छ । महिलाका लागि विशेषगरी गर्भवती हुनुअघि र गर्भवती अवस्थामा पनि ब्लड सुगर परीक्षण अनिवार्य मानिन्छ, जसले बच्चालाई समेत यसको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ ।
४. ब्लड प्रेसर
हाई ब्लड प्रेसर (उच्च रक्तचाप) पनि अहिलेको साझा स्वास्थ्य समस्या हो । उच्च रक्तचाप (हाइपरटेन्सन)ले मुटुरोगको जोखिम तीव्र बनाउँछ । नियमित रूपमा गरिने परीक्षणले चिकित्सकलाई उच्च रक्तचापको कारण पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ । यसले रक्तचापसँग जोडिएका मुटुसम्बन्धी रोगको रोकथाममा सहयोग पुग्छ । नियमित परीक्षणले रक्तचाप नियन्त्रणमा पनि सहयोग गर्छ ।
५. मुटु स्वास्थ्यका लागि लिपिड प्रोफाइल
मुटुको स्वास्थ्य अवस्था पहिचान गर्न महिलाले नियमित लिपिड प्रोफाइल परीक्षण गर्नु आवश्यक छ । यद्यपि, यो परीक्षण सबैका लागि उत्तिकै आवश्यक छ । मुटुसम्बन्धी रोग दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ र धेरै महिला यसबारे अनभिज्ञ छन् । त्यसैले महिलाले आफ्नो लिपिड प्रोफाइल नियमित परीक्षण गराउनु जरुरी छ ।
६. मेमोग्राफी एन्ड प्याप टेस्ट
स्तन क्यान्सर र सर्भाइकल क्यान्सर महिलाका साझा स्वास्थ्य समस्या हुन् । पछिल्लो समय नेपालमा यी क्यान्सरले पीडित महिलाको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ । प्रत्येक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कम्तीमा एकपटक स्तन क्यान्सरका लागि मेमोग्राफी र सर्भाइकल क्यान्सरका लागि पाप परीक्षण गराउनु अनिवार्य छ ।
७. बोन डेन्सिटी टेस्ट
महिलाहरू हड्डीसम्बन्धी रोगको पनि उच्च जोखिममा छन् । उनीहरू प्रायः लो बोन डेन्सिटी (हड्डीको न्यून घनत्व) बाट पीडित भइरहेका छन् । यसबाट बच्न महिलाले भिटामिन डी३ र क्याल्सियमको स्तर मापनका लागि स्क्रिनिङ गराउनु आवश्यक छ ।
उल्लेखित परीक्षण सुझाब आममहिलाको आवश्यकताका आधारमा दिइएको हो । विशेषखाले अवस्था वा स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका महिलालाई विशेषखाले परीक्षणको अवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकसित नियमित परामर्श लिनु आवश्यक छ ।